လော့​ချ​ဖို့ folder lock 6.6.5 and serials ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
pyaezonehein@ : ​အ​ရင်​တစ်​ခါ Gtalk ​ကို​ဘယ်​လို​ဖွင့်​လို့​ရ​မယ်​ဆို​တာ​နဲ့​ပတ်​သက်​ပြီး​တော့ ​စာ​တစ်​စောင် ​ပို​ဖူး​ပါ​တယ်... ​အစ်​ကို​စာ​မ​ပြန်​ပါ.. ​အ​ခု​ဟာ​က​တော့ ​ကျ​နော် Folder Lock ​ကို​သုံး​ပြီး​တော့ ​လော့​ချ​လိုက်​တာ. ​ပြန်​ဖွင့် ​မ​ရ​တော့ ​လို့​အဲ​ဒါ ​ဘာ​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​အစ်​ကို.. ​သုံး​လိုက်​တာ​က FolderLOCK.exe ​ပါ version 1.0.0.0 ​တဲ့ ​ဒေ​တာ​တွေ​က​အ​ရေး​ကြီး​တာ​တွေ​မို​လို့​ပါ....
​ညီ​ရေ ​အ​ခု folder lock 6.6.5 ​ကို ​ကီး​တော်​တော်​များ​များ​နှင့် ​တွဲ​ပြီး​တော့ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့​လဲ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​အ​ခု ​အ​ကို ​တင်​ပေး​လိုက်​တဲ့ ​ကီး​တွေ​က ​အ​သစ်​များ​ဖြစ်​သည့်​အ​ပြင် ​အ​များ​အ​ပြား ​တင်​ပေး​လိုက်​တာ ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ​အ​ဆင်​ပြေ​မှာ​ပါ. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​တစ်​ခု​တော့ ​ကြို​ပြီး​ပြော​ပါ​ရ​စေ. folder lock software ​ဟာ ​အင်​တာ​နက်​ချိတ်​လိုက်​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ update ​လုပ်​ဖို့ ​လှမ်း​ချိတ်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​အ​ချိန်​မှာ ​အစ်​ကို​တင်​ထား​တဲ့ folder lock ​ဟာ ​လူ​သုံး​အ​ရမ်း​များ​ပြီး​တော့ register ​လုပ်​မ​ထား​တဲ့ (​တ​နည်း​အား​ဖြင့်) ​မ​ဝယ်​ထား​တဲ့ serial number ​ဆို​ရင်​တော့ ​သူ​က Block ​လုပ်​ပစ်​ပါ​တယ်. ​အ​ခု ​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ဟာ ​ညီ့​ရဲ့ software ​တွေ​ကို ​ပြန်​ရ​ဖို့​အ​တွက် ​သက်​သက်​သာ ​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ. ​ထပ်​သုံး​တာ ​မ​သုံး​တာ​တော့ ​ညီ​နဲ့ ​သက်​ဆိုင်​ပါ​တယ်. folder ​ကို lock ​ချ​ဖို့​အ​တွက် ​သီး​သန့် software ​တွေ​လည်း​ပဲ ​ရှိ​ပါ​တယ်. ​အ​ကယ်​လို့​များ ​အစ်​ကို့​အ​နေ​နဲ့ ​ဒီ software ​ကို​ပဲ ​သုံး​ချင်​နေ​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​ကီး​တွေ ​ဘေး​ဖက်​နား​မှာ ​ထပ်​တင်​ပေး​ထား​ပါ့​မယ်. ​ဖြစ်​တဲ့​အ​ခါ ​ကီး​အ​သစ်​ထပ်​ထည့်​လိုက်​ပေါ့. ​တစ်​ခု​တော့ ​သ​တိ​ထား​ပေါ့. ​ကီး​အ​သစ်​ထည့်​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ ​အင်​တာ​နက်​ကို​တော့ ​ခ​ဏ​လေး ​ဖြုတ်​ထား​ဖို့​လို​ပါ​တယ်.
ifile | Mediafire | Mirrorcreator
minye March 1, 2012 at 10:27 PM
​အ​ကို​ရေ unistall ​ပေး​မ​လို့​လုပ်​တာ ​မ​ရ​ဘူး ​ဖြစ်​နေ​တယ် ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ
Thomas March 8, 2012 at 3:09 PM
​ကို ​ညီ​နေ​မင်း​ရေ..lock ​လုပ်​ပြီး ​နောက်​တ​ခါ ​ပြန်​ဖွင့်​တော့ ​အ​ရင်​က ​ရှိ​ပြီး​သားsoftware ​တွေ​က ​မ​တက်​လာ​တော့​ဘူး ​ဖြစ်​နေ​တယ်..
​တ​ခြား software ​အ​သစ်​တင်​ပြီး ​စက်​ပိတ်​လိုက်​တယ်..​နောက်​နေ့ ​ထပ်​ဖွင့်​ရင် ​အဲ​ဒီ software ​တွေ ​က ​မ​ရှိ​တော့​ဘူး..
​ဥ​ပ​မာ..Gtalk ​ကို ​ဒီ​နေ့install ​လုပ်​လိုက်​တယ်..​မ​နက်​ဖြန် ​ပြန်​ဖွင့် ​ရင် Gtalk ​မ​ရှိ​တော့​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်..
password ​တွေ​လည်း​မေ့​ကုန်​ပြီ..​အဲ​ဒီ Folder Lock software ​ကို uninstall ​လုပ်​တော့​လည်း ​မ​ရ​ဘူး..
​အ​ခု​တော့ ​ဘာ​မှ ​ကို ​မ​လုပ်​ရဲ​သေး​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်..